အရင် မေးခွန်းသို. ပြန်သွားပါ။
သဲလွန်စ: '%c' အတွက် အကူအညီ, ပုံသေ=%d>
သဲလွန်စ: '%c'အတွက် အကူအညီ>
သဲလွန်စ: '%c' အတွက် အကူအညီ, ပုံသေ=%s>
[ရှေ.ဆက်သွားရင် enter ကို နှိပ်ပါ။]
အပြန်အလှန် အကျိုးသက်ရောက်သော shell
ယခုသတင်းအသိပေးပြီးပါက "ash", Bourne-shell clone ဖြင့် သင်အလုပ်လုပ်နေလိမ့်မည်။
root ဖိုင်စနစ်မှာ RAM disk ဖြစ်သည်။ ဟာ့ဒ်ဒစ်၏ ဖိုင်စနစ်သည် "/target" တွင် တပ်ဆင်ထားလိမ့်မည်။ သင့်အတွက် ရရှိနိုင်သော တည်းဖြတ်ကိရိယာမှာ နာနိုဖြစ်သည်။ ၎င်းမှာအလွန်သေးငယ်ပြီး နားလည်သဘောပေါက်ရန် လွယ်ကူသည်။ မည်သည့် Unix utilities များ သင့်အတွက်ရရှိနိုင်သည်ကို သိရှိနိုင်ရန် "help" ခိုင်းစေချက်ကို အသုံးပြုပါ။
ကွန်ပျူတာတွင် ထည်.သွင်းခြင်း စာမျက်နှာသို. ပြန်သွားရန် "exit" command ကို အသုံးပြုပါ။